तपाईंको कपाल तपाईं फिट दिँदै छ? यी विचारहरु जाँच! | जुम्रा लीख s
तपाईं यसलाई आफ्नो कपाल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ कि सोच हुन सक्छ, तर यो मामला हुँदैन. सही बाटो आफ्नो बाल हेरचाह यो व्यवहार गर्ने सही तरिका थाह तपाईं निर्भर. आफ्नो बाल को राम्रो हेरचाह गर्ने बारे केही सुझावहरु लागि पढ्न.
तपाईं पातलो वा ठीक बाल भने भारी कंडीशनर टाढा रहन. तिनीहरूले मात्र तल यसलाई बेहतर र पतली हेर्न बनाउन आफ्नो बाल लगाउने हुनेछ. मात्रा लागि प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो कंडीशनर mousse कंडीशनर वा छोड्न-मा कंडीशनर छन्.
आफ्नो बाल देख एक सानो नीरस र सुक्खा? यदि यति, त्यसपछि आफ्नो ताले यो मा-घर कंडीशनिंग उपचार प्रयास. आफ्नो बाल धुन र बिस्तारै कुनै पनि अतिरिक्त चिस्यान बाहिर blot, त्यसपछि कंडीशनर लागू र धेरै मिनेट को लागि एक प्लास्टिक शवर टोपी राख्न. यो आफ्नो बाल अनुमति दिन्छ पूर्णतया चिस्यान मा कंडीशनर र लक अवशोषित गर्न.
आफ्नो बाल सुक्खामा एक झटका ड्रायर प्रयोग गर्न प्रयास. गर्मी स्टाइल आफ्नो बाल गर्न हानिकारक हुन सक्छ, र अक्सर घुंघराला देख पात. सट्टा, एक समय को लागि एक तौलिया भित्र भिजेको कपाल र्याप. यो असहनीय frizz नबनाई स्वाभाविक ड्राई आफ्नो कपाल मदत गर्नेछ.
सकेसम्म खण्डमा एक झटका ड्रायर प्रयोग. गर्मी संग आफ्नो बाल शैली अक्सर आफ्नो बाल बिगार्न र यसलाई घुंघराला बन्न सक्छ. के तपाईं सट्टा गर्नुपर्छ अलि गर्दा लागि आफ्नो बाल एक तौलिया मा र्याप राख्न छ. यो प्राकृतिक सुकाउने बढावा र तपाईंले गरेको हुँदा रहनेछ भन्ने frizz को राशि minimizes.
तपाईं बारम्बार ट्रिमहरू पछि छिटो बाल विकास देख्नुहुनेछ कि धारणा बेवास्ता. स्वस्थ कपाल प्रत्येक महिनाको उही रकम लगभग बढ्छ, लगभग एक आधा इन्च. तपाईं यो गर्मिहरु मा एक सानो छिटो बढ्न देख्न सक्छ, वा जब तपाईं बायोटिन समावेश पूरक लिन, किनभने वृद्धि समावेश हर्मोन छन् तर छ. ट्रिमहरू विभाजन समाप्त नामेट, र आफ्नो कपाल धेरै राम्रो बनाउन.
एक प्रस्ट्याउने स्याम्पु नीरस भएको छ कि बाल मदत गर्न सक्छ. अक्सर, नीरस कपाल समय उत्थान कपाल को हेरविचार उत्पादन को परिणाम हो. बाहिर उत्पादन गठन-अप मुद्दाहरू समाधान गर्न हरेक केही शैंपू एक प्रस्ट्याउने उत्पादन आफ्नो नियमित स्याम्पु स्विच.
तपाईं आफ्नो कपाल कसरी देखिन्छ चाहन्छन् भने तपाईं पौडिरहेका गरेको हुँदा, यस प्रभाव नकल गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ कि फरक उत्पादनहरु. आफूलाई एक नुन स्प्रे रूपमा बजार भनेर उत्पादनहरु खोज्न. तपाईं घर मा तपाईंको आफ्नो समुद्र छालहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ. बस पानी धेरै औंस तालिका वा कोशेर नुन को एक चम्मच थप्न. यदि चाहेको, तपाईं पनि लैवेंडर तेल थप्न सक्नुहुन्छ (दस घटेको) एक सुखद गन्ध र मइस्चराइजिंग प्रभाव लागि.
टिप! तपाईं सागर मा एक दिन पछि आफ्नो कपाल को नजर आनन्द भने, तपाईं आफ्नो कपाल नै प्रभाव दिन सक्छ भन्ने उत्पादनहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ. बाहिर भनिन्छ कि स्प्रे खोजी “नुन स्प्रे” वा अर्को यस्तै नाम.
जब तपाईं कपाल को हेरविचार उत्पादन प्रयोग प्राकृतिक सामाग्री छ कि उत्पादनहरु प्रयोग. आफ्नो प्राकृतिक बाल बनावट काम गर्नेछ शैम्पू र कंडीशनर प्रयोग. तपाईं को लागि राम्रो काम गर्छ भन्ने एउटा फेला पार्न अन्य उत्पादनहरु प्रयास गर्न प्रतिक्षा नगर्नुहोस्!
अब तपाईं यो लेख पढेको छु भन्ने, यसलाई उचित दोकान समय धेरै आवश्यकता छैन कि स्पष्ट हुनुपर्छ, पैसा, र उत्पादनहरु. आशा छ, तपाईं यहाँ केही सुझावहरू फेला तपाईंले प्रयोग गर्न तुरुन्तै राख्न सक्छ कि. तपाईं राम्ररी आफ्नो बाल हेरचाह भने, तपाईं आफैलाई कपाल को कि सुन्दर र स्वस्थ टाउको भएको देख्ने.
ट्याग: कपाल को हेरविचार उत्पादन